Bogga ugu weyn / Tilmaamaha qasabada / Habab fudud oo Dayactir loogu sameeyo tuubada daadata ee 5 Tallaabo oo Fudud
2020 / 10 / 12 QoondayntaTilmaamaha qasabada 4588 0
Philipp Mauerhofer / EyeEmSawirro Getty
Hadday tahay iyo haddii kaleba inay tahay sababta biyo isku urursiga hoosta saxankaaga, ama codka dhibcaha dhibta leh ee kugu habeyn kara fiidkii, tuubada soo daadinaysa ayaa ah mid dhib ku ah oo si toos ah ugu soo noqonaysa dib-u-dhac buuxa haddii aan si sax ah wax looga qaban. Nasiib wanaag, dhigista joojinta qasabad daadata, sida sababta oo ah qasabada riixitaanka jikadaada, waxay noqon kartaa wax la yaab leh oo raqiis ah oo sahlan.
Qalabka aad rabto:
• Wareeg la hagaajin karo; C wareer
• Phillips iyo / ama darawal-fidiyaha madaxa-fidsan
• Saliid gelida, oo u eg WD-40 ama CRC
• Dharka dharka lagu beddelo iyo O-ring
1 Step: Ha ka sii darin tiro badan adoo u hagaajinaya qasabaddaada waxyeello soo gaadhay ee loo yaqaan 'Previous Devoted'. Kahor intaadan u isticmaalin wax qaboojiye ama shaandheeye qalabkaaga, hubso in biyahaaga la bixiyo la damiyay, laga soo bilaabo gacmaha dusha ka saaran saxanka ilaa burooyinka ku hoos yaal maamulkaas biyaha ka soo galaya qadka mabda'a.
2 Step: Ka qaad wax kasta oo ka mid ah waxyaabaha la isku qurxiyo ee heshiiska leh burooyinka. Fududeyn fudud oo leh firi-fiiq-madax leh ayaa daryeeli doonta taas. Qeyb kasta hoosteeda, waxay u badan tahay inay jiri doonto maroojin kor u qaadaya heshiiska asalka. Ka fur fur, ka dibna si tartiib ah uga qaad heshiiska adiga iyo madaxaaga fidsan. Isticmaalidda saliidda soo daatay waxay kaa caawin kartaa furfurista, taas oo kuu oggolaaneysa inaad heshiiska qasabadda ku qaadatid asliga ah.
3 Step: U adeegso bambarkaaga si aad u furto lowska xirxiraya. Halkaas waxaa ugu wanaagsan in laga ogaado jirida. Ka qaad taas si wax ku ool ah. Ku tiirsanaanta tuubada, qaar ka mid ah jirridaha ayaa si fiican u muuqda, halka kuwa kalena ay ka leexanayaan waalka. Hubi qaybaha la tirtiray ee dhaawac kasta ah.
4 Step: Haddii wax kasta oo yar oo aan waxyeello gaadhin heerkan, baadho O-giraanta iyo weelka ku jira kursiga waalka - waxay noqon karaan sharraxaadda daadashadaada. Dhaqaaga kaxee oo ku dheji bedel kale kursiga.
Waa lagama maarmaan in la xaqiijiyo maydhashadaada beddelka ah iyo O-ringings waa isku mid dhab ah. Haddii aadan hubin labadaba, tijaabi kursiga si aad u aragto in geesaha ay u dhigmayaan qaab-dhismeedka qaab-dhismeedka ama mashiinka fidsan, oo iibso nooca ku habboon. Waxaa macquul ah inaad ubaahantahay inaad gashado O-giraanta duugoobay dukaankaaga birta ah si aad uhesho cabirka saxda ah. Adiguba sidoo kale waad iibsan kartaa xirmo leh cabbirro fara badan oo kala duwan oo O-ring ah - caadi ahaan waa qiimayaasha lammaanaha dheeriga ah.
5 Step: Laga soo bilaabo halkan, si dhakhso leh isugu soo ururi dhammaan qaybaha (sida tan dhaqe / O-giraan, jirid, lowska xirxiraya, fur iyo la macaamil). Si tartiib tartiib ah oo tartiib ah u rog burka si aad u hubiso biyaha shaqeeya una tijaabi si aad u ogaato goorta aad leefleeysay daalkaas.
Haddii, ka dib dhammaan shaqadaada culus, aad ogaato in tuubadu ay wali daadinayso, markaa kicinta ayaa sidoo kale noqon karta daxalka kursiga waalkaaga. Haddii aan la nadiifin waqti ka dib, waxay u badan tahay inay soo saari doonto waxyaabo daadanaya meel u dhow xuubka. Arrimo kala duwan oo suurtagal ah ayaa ah shaambado duugoobay, qaybo bilaash ah, ama, xitaa ka sii xun, dhuumaha waxyeellada gaarey Haddii ay dhacdo in cilladbixintaada ay ka dhalato aagaggan, ama haddii arrimo kedis ah oo kaladuwan ay dhacaan, markaa waxaa laga yaabaa in la joogo waqtigii la magacaabi lahaa aqoonyahan aqoonyahan leh.
Agabkan maaddadan waxaa abuuray oo dayactiray 3-aad isku soo duub, oo la soo galiyay boggan si looga caawiyo macaamiisha inay u soo bandhigaan cinwaankooda e-mailka. Waxaad awoodi kartaa inaad ka hesho faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan tan iyo waxyaabaha la barbardhigi karo ee ku saabsan piano.io
Hore:: Madaxyada qubeyska ugu fiican 2020 Next: Miyaad ku dhiiran kartaa inaad ku iibsato qasabad saxanka musqusha wax ka yar $ 20?
2020 / 12 / 21 4950